अब आकासमा समेत विज्ञापन, रुसी कम्पनी कम्पनीले थाल्यो काम | Ratopati
अब आकासमा समेत विज्ञापन, रुसी कम्पनी कम्पनीले थाल्यो काम
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १०, २०७५ chat_bubble_outline0
एजेन्सी । भविष्यमा रातको आकास हेर्दा तारा र चन्द्रमासँगै विभिन्न ब्राण्डका विज्ञापनहरु देखिन सक्छ । यसको लागि स्टार्ट–रकेट नामक एक रुसी कम्पनीले नयाँ योजना ल्याएको छ ।
यस योजनालाई मुर्तरुप दिन रकेटबाट स–साना भूउपग्रहहरु अन्तरीक्ष पठाइनेछ । तिनले सूर्यको प्रकाश परावर्तन गराएर रातको समयमा आकाशमा ब्राण्डका शब्द अथवा लोगोको आकृतिमा चम्किनेछ ।
कम्पनीका अनुसार सन् २०२१ सम्म पहिलो विज्ञापन पठानेछ । यी विज्ञापनलाई एकै पटक पृथ्वीका अर्बौ मानिसहरुले हेर्न सक्छन् ।
यसरी गर्नेछ काम
विज्ञापनको लागि एक साथ कयैन भूउपग्रहमा शब्दहरु र लोगोका श्रृखंलाहरु पठाइन्छ ।
प्रत्येक भू–उपग्रहमा तीस फुट चौडा प्रतिबिम्ब सेल जोडिनेछ जसले सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीतर्फ प्रतिबिम्बित गर्नेछ ।
यी भू–उपग्रहहरु पृथ्वीको तल्लो कक्ष अर्थात पृथ्वीको सतहबाट ४८० किमीको उचाईमा तैरिरहन्छ ।
सन् २०२० बाट सुरु हुनेछ परीक्षण
कम्पनीका अनुसार पहिलो प्रोटोटाइप विज्ञापन अर्को वर्षसम्म प्रक्षेपण गर्न सकिनेछ । सफलतापूर्वक परीक्षणपछि लगभग ५० वर्ग किमी आकारको विज्ञापन पठाइनेछ । यो दिनमा तीनदेखि चार पटक र एक पटकमा छ मिनेटसम्म आकाशमा देखिनेछ ।
स्टार्ट–रकेटले हालै यो परियोजनाको अवधारणा समेटको भिडियो जारी गर्यो ।
तर अवधारणामा विज्ञापनहरुको लागी कुन खालको रकेटको प्रयोग हुनेछ ? अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन नियामकले यस परियोजनालाई अनुमति दिन्छ ? र यो विज्ञापनहरुका लागि कति पैसा आवश्यक पर्छ ? आदी बारेमा कम्पनीले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
इलन मस्कबाट प्रेरणा
कम्पनीका सीईओ भ्लादिमिर सितनिकोवले इलन मस्कको स्पेस–एक्सबाट आफूलाई प्रेरणा मिलेको र रकेट ल्याबको डिस्को बाल प्रोजेक्टपछि आफूले अन्तरीक्षमा बिलबोर्ड विज्ञापन लगाउने फैसला गरेको बताएका छन् ।
सितनिकोवले यो परियोजनाले संसारलाई विज्ञापनको सबैभन्दा अनौठो माध्यम प्रदान गर्ने दावी गरे ।
–यो विज्ञापन रातको समय केही बेरको लागि मात्र देखिन्छ । संसारभरीका कयैन विशेषज्ञहरुले यस्तो विज्ञापनलाई व्यर्थ मानिरहेका छन् ।
–वैज्ञानिकहरुका अनुसार अहिले नै अन्तरिक्षमा कयैन भू–उपग्रह तैरिरहेका छन् । अब विज्ञापनका लागि पनि भू–उपग्रह पठाउन थालेपछि संख्या बढेर यीनिहरु आपसमा ठक्कर खाने सम्भावना बढ्नेछ ।
–अनुमानका अनुसार अन्तरिक्षको कक्षमा ७.५ हजार टन भू–उपग्रहका फोहोर तैरिरहेका छन् । यो खालको भूउपग्रह परियोजना यो फोहोर अझै बढाउनेछ ।
सुतिरहेकी महिलालाई विमानभित्रै छोडेर गए चालक दलका सबै सदस्य, एयरलाइन्सले माग्यो माफी
अदालतले सम्बन्धविच्छेदपछि श्रीमतीलाई घरको काम गराएबापत् श्रीमानबाट दिलायो दुई करोड रुपैयाँ
देशभक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने नाम अंकल साम, विश्वमा चाहिँ अमेरिकी दादागिरीको प्रतीक
चरालाई समेत रुखमाथि तानेर लाने दर्जी कमिला
आप्रबासीलाई दिइँदै आएको शरणसम्बन्धी प्रावधानमाथि रोक लगाउने अमेरिकाको घोषणा
बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेहरुको संख्या ६९ पुग्यो (अपडेट)
घुससहित नासु पक्राउ
वर्षातको समय अझै धेरै बाँकी छ, सचेत रहनुस् : मन्त्री यादव
सिरहामा बाढीमा डुबेर २ बालिकासहित ४ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता
केनको कप्तानीमा विश्व ११ टोली
पत्रकार हुँ भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ
सप्तरीमा बाढी पीडितले जलाए मन्त्री उपेन्द्र यादवको पुत्ला
सेनाद्वारा बाढीपहिरो पीडित ७२३ को उद्धार